शरदको महेन्द्रनगर र दीपेन्द्रको अत्तरिया उपाधि भिडन्तमा | Hamro Khelkud
शरदको महेन्द्रनगर र दीपेन्द्रको अत्तरिया उपाधि भिडन्तमा
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) उपाधिको लागि आज महेन्द्रनगर युनाइटेड र सिवाईसी अत्तरियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट मैदानमा दिउँसो १२ : ३० पछि सुरु हुनेछ । दुवै टोली पहिलो डिपिएल उपाधिको दाउमा छन् । युवा खेलाडी दिपेन्द्रसिंह ऐरीको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान प्रवेश गर्ने छन् । यता नेपाली घरेलु लिगमा सफल कप्तानको रुपमा परिचित शरद भेषावकर पनि पहिलो डिपिएल उपाधि जित्न अातुर छन् । युवा टोली अत्तरिया र अनुभवी टिम महेन्द्रनगरबीच फाइनल खेल कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।
वर्षाले प्रभावित समुह चरणको खेलमा महेन्द्रनगर युनाईटेडले सिवाईसी अत्तरियालाई ७ विकेटले हराएको थियो । त्यस्तै पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौंलाई ४१ रनले पराजित गर्दै अत्तरिया सोझै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । यता एलिमिनेटर खेलमा रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई १ रनले हराउँदै महेन्द्रनगर क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको थियो । तर क्वालिफायरमा आफ्ना खेलाडी अंकित दबासमाथि बलिङमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै काठमाडौंले क्वालिफायर नै बहिष्कार गरेपछि महेन्द्रनगरले फाइनलमा मौका पायो ।
समुह चरणमा कुन टिमको प्रर्दशन कस्तो ?
सिवाईसी अत्तरिया युवा टोलीले भरिएको र कागजी रुपमा प्रतियोगिताकै कमजोर टोली हो । तर मैदानमा भने प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट टिम सावित गर्यो । समुह चरणका ५ खेलमा ४ मा जित र १ मा हार का साथ शिर्ष स्थानमा रहदै क्वालिफायर खेलेको थियो । पहिलो खेलमै धनगढीमाथि ५ रनको रोमान्चक जित हात पारेको अत्तरियाले दोस्रो खेलमा रुपन्देहीलाई ३९ रनले हरायो । त्यस्तै तेस्रो खेलमा महेन्द्रनगरसँग ७ विकेटले पराजित भयो । विराटनगर किंग्सलाई १० रनले हराउँदा काठमाडौंलाई ७ विकेटले पराजित गर्यो ।
यता कागजी रुपमा प्रतियोगिताकै बलियो टोली महेन्द्रनगरको मैदानमा भने कमजोर प्रर्दशन गर्यो । ५ खेलमा १ मा जित तथा दुई मा हार र दुईमा अंक बाड्दै चौथो स्थानमा रहेर प्ले अफमा पुग्यो । पहिलो खेलमा रुपन्देहीसँग २ र दोस्रो खेलमा काठमाडौंसँग ७ रनले पराजित भएको महेन्द्रनगर विराटनगर र धनगढीसँग बर्षाको कारण अंक बाड्यो । अन्तिम खेलमा अत्तरियालाई ७ विकेटले हराउँदै विराटनगरलाई नेट रन रेटले पछि पार्दै प्ले अफमा पुगेको थियो ।
जारी प्रतियोगितामा सिवाईसी अत्तरियाका कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरी,भारतीय खेलाडी सन्नी पटेल, जयकिशन कोल्सावाला,दिपेन्द्र रावत, भुवन कार्कीले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका छन् । र यी खेलाडीनै अत्तरियाका प्रमुख हतियार हुन् ।
यता महेन्द्रनगरबाट सागर ढकाल, अभिनास बोहोरा, मोहम्मद नाविद, अमरसिंह राउटेला, आनन्द सुब्रमनियमको प्रर्दशन उत्कृष्ट छ । यीनै खेलाडीको प्रर्दशनमा महेन्द्रनगर बढि निर्भर रहने छ ।
पुरस्कार राशी ?
डिपिएलको विजेताले रु ३० लाख प्राप्त गर्नेछ । उपविजेतामा चित्त बुझाउने टोलीले १२ लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो भएकोे काठमाडौंले ४ लाख र चौथो स्थानमा रुपन्देहीले २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको मोष्ट भेल्युवल प्लेयरलाई गोल्डस्टार सुनको जुत्ता दिईने छ । म्यान अफ द सीरिज, वेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरलाई समेत उचित पुरस्कारको व्यवस्था रहेको छ ।